News Code : 652896
အင်မတန်ကျော်ကြားသောဟဒီးစ်တော်တစ်ပါးဖြစ်သည့်ဟဒီးစ်စေစ ကာလိုင်းအားဟဒီးစ်ပါရဂူများအနေဖြင့်မိမိတို့၏ ကျမ်းဂန်များ၌ပုံစံနှစ်မျိုးဖြင့် တင်ပြထားပါသည်။မလွဲမသွေ၎င်းပုံစံနှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုသာလျှင်မှန်ကန်ပေမည်။ပုံစံနှစ်မျိုးသည်ကား။
الف:''کتاب اللّہ و عترتی أهل بیتی''
ب:''کتاب اللّہ وسنتی''
ဘယ်အရာ မှန်သလဲဆိုတာ စိစစ်လေ့လာကြည့်ပါစို့ ...
တမန်တော်မြတ်ကြီးမိုဟမ္မဒ်(ဆွ)ထံမှဆင့်ပြန်ထားသောဟဒီးစ်အမှန်၊ စိတ်အချရဆုံးပုံစံသည်ကား (اهل بیتی )ဖြစ်ပါသည်။((اهل بیتی ဆိုသည့်စကားစု ကိုမသုံးထားဘဲ၊(سنتی) ကိုသုံးစွဲထားသော ရီဝါယတ်သည်မှန်ကန်ကြောင်းခိုင် လုံသောစနဒ်အထောက်အထားမရှိ ၍မမှန်ကန်ချေ။
اهل بیتی ဆိုသည့်စကားစုအတွက်သာမှန်ကန်သောအထောက်အထားအပြည့်
اهل بیتی အတွက်စနဒ်အထောက်အထား
''ألاٰ أیّہاالناس ، فاِنما أنا بشر یوشک أن یأتی رسول ربی فأجیب وأنا تارک فیکم الثقلین. أولھما کتاب اللّہ فیه الھدی والنور ، فخذوا کتاب اللہ واستمسکوا به ، فحث علی کتاب اللّہ ورغب فیه ثم قال: وأھل بیتی اُذکرکم اللّہ فی أھل بیتی . اُذکرکم اللّہ فی أھل بیتی . اُذکرکم اللّہ فی أھل بیتی .''
အဓိပ္ပာယ်။။အိုလူထုအပေါင်းတို့-ဧကန်မုချကျွန်ုပ်သည်လူသားတစ်ဦးပင်ဖြစ် ပေသည်။များမကြာမှီအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အစေတမန်ကျွန်ုပ်ထံရောက်လာပေမည်။ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်၎င်း၏ဖိတ်ခေါ်မှု (သတင်းကို)ပို့ချရပေမည်။
ကျွန်တော်အနေဖြင့်အသင်တို့အားတန်ဖိုးကြီးမားသောအရာနှစ်ခုကို ထားခဲ့ပေမည်။တစ်ခုသည်ကားအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဖြစ်ပါသည်။၎င်းကျမ်းဂန်အတွင်းလမ်းညွှန်ပြသမှုနှင့်နူးရ်ပါရှိသည်။ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ကျမ်းဂန်ကိုဆုပ်ကိုင်ထားပါလေ။မြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင် ထားပါလေ။ထို့နောက်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ကျမ်းဂန်အပေါ် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖေါ်ရန်တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးနောက်၊ ဆက်လက်၍မိန့်တော်မူသည်မှာ-
ဒုတိယသည်ကားကျွန်ုပ်၏အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)ဖြစ်ပေသည်။ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အားအဟ်လေဘိုက်(အ.စ)နှင့်စပ်လျဉ်းပြီးတမ်းတသိရပေမည်။ဤဝါကျအားသုံး ကြိမ်၊သုံးခါထပ်၍မိန့်တော်မူခဲ့ပေသည်။
ဤစာသားကိုဂျနာဗေဒါရ်မီအနေဖြင့်လည်းမိမိ၏ကျမ်း(سنن ) ၌တင်ပြထားပါ သည်။
အထက်ပါသာဓကနှစ်ခု၏စနဒ်အထောက်အထားများသည်နေမင်း၏အလင်းရောင်ပမာထင်ရှားနေပြီး၊ အပြစ်အနာအဆာသေးသေးလေးမျှပင်မရှိဟုမလွဲမသွေ၊ပြောနိုင်ပေ သည်။(ဟဒီးစ်ပညာကျွမ်းကျင်သူတိုင်းသိပေသည်။)
၂။ဂျနာဗေသေရ်မီဇီအနေဖြင့်ဤစာသား و عترتی اهل بیتی အားတင်ပြ ထားပါသည်။ဟဒီးစ်၏စာသားမှာဤကဲ့သို့ဖြစ်ပေသည်။
''اِنّ تارک فیکم ما اِن تمسکتم به لن تضلوا
بعدی ، أحدھما أعظم من الاخر : کتاب اللّہ
حبل ممدود من السماء اِلی الأرض و عترتی
أھل بیتی ، لن یفترقا حتی یردا علّیَ الحوض
فانظروا کیف تخلفونی فیها''
ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အသင်တို့အားအရာနှစ်ခုအားအမာနသ်အဖြစ်ထားပေမည်။၎င်းအရာနှစ်ခုအားမြဲမြံစွာဆုပ်ကိုင်ထားသမျှကာလပတ်လုံး၊ လုံးဝဥဿုန်လမ်းလွဲ၊လမ်းမှားမည်မဟုတ်ချေ။တစ်ခုသည်အခြားတစ်ခုထက်ပို၍ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်ပေသည်။မိုးကောင်းကင်မှမြေပြင်ဘက် သို့တွဲထားသောရဟ်မသ်၏ကြိုးတော်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ဖြစ်ပေသည်။ နောက်တစ်ခုသည်ကားကျွန်ုပ်၏အိမ်တော်သူ၊အိမ်တော်သားများဖြစ်ပါသည်။ဤအရာနှစ်ခုသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုမည်သည့်အခါမျှကွဲကွာကြမည်မဟုတ် သည့်အပြင်ကျွန်ုပ်နှင့်လာရောက်၍ကောင်စဲရ်ရေကန်တော်၌လာဆုံကြပေ မည်။အသင်တို့သည်(အွန်မသ်သားများသည်ကျွန်ုပ်မရှိသည့်နောက်ပိုင်း၎င်း အရာနှစ်ခုနှင့် မည်ကဲ့သို့ပြုမူဆက်ခံခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ကြည့်ရှုရမည်ဖြစ်ပါသည်။
စဟီးကျမ်းပြုစုသူမွတ်စလင်နှင့်စိုနန်ကျမ်းပြုစုသူသေရ်မေဇီးတို့ဖြစ်ပါ သည်။၎င်းတို့ နှစ်ဦးအနေဖြင့် اهل بیت ဆိုသည့်စကားစုကိုသာအလေးပေး ထားကြပေသည်။ဤသို့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့၏ဆိုလိုချက်အတွက်အထောက်အထားအဖြစ်ပြရန်လုံလောက်ပေသည်။
اهل بیتی စကားစုနေရာ၌ سنتی ဟုလာရှိသောရီဝါယတ်သည် مجهول ဟဒီးစ်တော်ဖြစ်ပြီး၊အားနည်းသော(စိတ်မချရသော)အထောက်အထားကိုသုံးစွဲထားပြီး၊အမဝီ(ဗနီအိုမိုင်ယာမင်းဆိုး၊မင်းညစ်များ) လက်ထက်၌လုပ်ကြံထား သောဟဒီးစ်ဖြစ်ပေသည်။
မှတ်ချက်။။ مجهول ဆိုသည်မှာ- ရီဝါယတ်ကိုဆင့်ပြန်ထားသောသူများကိုအ တိအကျမသိရ ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။(မြန်မာဘာသာပြန်)
၁။ဟာကင်မ်မေနီရှာဘူရီးအနေဖြင့်မိမိ၏ကျမ်း(မွတ်စသရေခ်ျ)၌အောက်ပါအ ထောက်အထား (စနဒ်)များဖြင့်ရေးသားသီကုံးထားပါသည်။
''عباس بن أبی أویس'' عن ''أبی أویس'' عن ''ثور بن زیدالدیلمی''عن ''عکرمه'' عن ''ابن عباس'' قال رسول اللّہ :''یا أیّھا الناس اِنّی قد ترکت فیکم ، اِن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً کتاب اللّہ و سنة نبیه.''
အိုလူထုအပေါင်းတို့အသင်တို့အကြားအရာနှစ်ခုအားထားပေးခဲ့ပါ သည်။ထိုအရာနှစ်ခုကိုစွဲမြဲစွာဆုပ်ကိုင်ထားသမျှကာလပတ်လုံး၊လုံးဝဥဿုန်လမ်းလွဲ၊လမ်းမှားမည်မဟုတ်ချေ။တစ်ခုသည် ကားကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်တစ်ခုသည်ကားတမန်တော် မြတ်၏စွန္နတ်တော်ဖြစ်ပေသည်။
ဤစကားစု၏ရီဝါယတ်တင်ပြသူနှစ်ဦးမှသားနှင့်အဖေဖြစ်ပြီးစနဒ်အ ထောက်အထားလောကအတွက်( آفت )ပြဿနာဖြစ်သော ဒုက္ခတစ်ခုဖြစ်ပေ သည်။ထိုနှစ်ဦးမှအစ္စမာအီးဗင်အဗီးအိုဝိုက်စ်တို့ဖြစ်ပေသည်။သားအဖနှစ်ဦးစလုံးသည်စိတ်ချရသူများ မဟုတ်သည့်အပြင်၊လိမ်လည်မုသားဆိုသူများ၊ဟဒီးစ်အတုပြုလုပ်သူများအဖြစ်တင်ပြခြင်းခံထားရသူများ ဖြစ်ပေသည်။
အေလ်မေရေဂျာ(ဟဒီးစ်ဆင့်ဆိုသူများကိုမှန်မမှန်စစ်ဆေးရသောပညာရပ်)၏သုတေသီတစ်ခုဖြစ်သော ဟာဖွေစ်မဇီးအနေဖြင့်မိမိကျမ်း( ( تهذیب الکمال ၌အစ္စမာအီးနှင့်၎င်း၏အဖေနှင့်ပက်သက်ပြီးတင်ပြထားသည်မှာ-
ယာဟ်သားဗင်မိုအီး(န)(ကြီးမားသောထိပ်တန်းအိုလမာယေရေဂျာမှတစ်ပါး) ပြောကြား သည်ကား-အဘူအိုဝိုက်စ်နှင့်၎င်း၏သားတို့သည်အားနည်းသူ များဖြစ်ကြပေသည်။ဆက်လက်၍ယာဟ်သားဗင်မိုအီး(န)မှတင်ပြသည်မှာ-ဤသူနှစ်ယောက်စလုံးသည်ဟဒီးစ်သူခိုးများဖြစ်ကြပေသည်။အဗ်နေမိုအီး(န)ဆက်လက်၍အဘူအိုဝိုက်စ်၏သားနှင့်ပက်သက်ပြီး ဤကဲ့သို့တင်ပြထားသည်မှာ-၎င်းအား ယုံကြည်ရန်ဆိုသည်မှာမဖြစ်နိုင်ချေ။
နေစာအီအနေဖြင့်၎င်း(အဘူအိုဝိုက်စ်၏သား)နှင့်ပက်သက်ပြီးဆန့်ကျင်ရေးသားထားရာ၊၎င်း၏ဟဒီးစ်ကိုစွန့်ပစ်ရန်အထိရေးသားထားပေသည်။ အဗ် နေအဒီး(အိုလမာယေ ရေဂျာမှအာလင်တစ်ပါး)ဆိုထားသည်မှာ-အဗ်နေအဘီး အိုဝိုက်စ်အနေဖြင့်မိမိ၏အမေဘက်မှဦးလေးမာလစ်က်ထံမှမည်သူမျှနားလည်လို့မရနိုင်သော၊လက်မခံနိုင်သောကြောင်တောင်တောင်ဟဒီးစ်များ ကိုတင်ပြထားပေသည်။
အဗ်နေဟဂျရ်အနေဖြင့် فتح الباری ၏စကားဦး၌ရေးသားထားသည် မှာ-အဗ်နေအဘီးအိုဝိုက်စ်၏ဟဒီးစ်ကိုစံမှတ်ကျောက်အဖြစ်သတ်မှတ်လို့မ ရပေ။အကြောင်းသည်ကားနေစာအီအနေဖြင့်၎င်းနှင့်ပက်သက်ပြီးကန့်ကွက်ထားသောကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။
ဟာဖွေစ်ဆရက်(သ)အဟ်မဒ်ဗင်စဒီးက်အနေဖြင့် မိမိ၏ကျမ်း (فتح الملک العلی ( ၌စလ်မာဗင်ရှာဖေဗ်မှတဆင့်ရေးသားထားသည်ကား-ကျွန်တော်(စလ်မာဗင်ရှာယေဗ်)အနေဖြင့်အစ္စမာအီးဗင်အဘီးအိုဝိုက်စ် ထံမှသူကိုယ်တိုင်ပြောဆိုသည်ကိုနားသောတဆင်ခဲ့ရသည်မှာ-မဒီနာမြို့သူ၊ မြို့သားများအကြားအကြောင်းအရာတစ်ခုနှင့်ပက်သက်ပြီးအကွဲ၊အလွဲဖြစ် တိုင်းကျွန်ုပ်(အစ္စမာအီးဗင်အဘီးအိုဝိုက်စ်)အနေဖြင့်ဟဒီးစ်အတုကိုလုပ်ကြံ ပေသည်။
အဘူအိုဝိုက်စ်နှင့်ပက်သက်ပြီး၎င်း၏ဟဒီးစ်ကိုရေးသားတင်ပြ၍ရသော်လည်းဟွဂ်ျဂျသ်(စံမှတ်ကျောက်အဖြစ်အသုံးပြု၍မရကြောင်း၊ ၎င်းဟဒီးစ်သည်အထောက်အထားခိုင်လုံပြီးစိတ်ချယုံကြည်ရသည့်အဆင့်အထိမရှိ်ကြောင်းအဘူဟသေမ်အနေဖြင့်မိမိ၏ကျမ်းجرح و تعدیل ၌ရေးသားထားပေသည်။
ထို့အပြင်အဘူဟာသေမ်အနေဖြင့်အဗ်နေမိုဘီး(န)ထံမှတဆင့်တင်ပြ သည်မှာ-အဘူအိုဝိုက်စ်သည်စိတ်ချယုံကြည်ရသူမဟုတ်ချေ။ရီဝါယတ်တော် အနေဖြင့်၎င်းသားထံမှစနဒ်အထောက်အထားအဖြစ်တင်ပြမှုသည်လုံးဝ ဥဿုန်မမှန်ကန်ကြောင်းဆိုထားပါသည်။တင်ပြပြီးဖြစ်သောဤဟဒီးစ်တော် သည်စစ်မှန်သော၊စိတ်ချရသောရီဝါယတ်အရစစ်ကြည့်လျှင်ဆန့်ကျင်ဘက် ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရပေမည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်သည်ကား-ဟဒီးစ်ကိုတင်ပြသူဆိုလိုသည်မှာ-ဟာကေမ်မေနေရှာပူရီးကိုယ်တိုင်ဤဟဒီးစ်အားမမှန်ကန်သောဟဒီးစ်အဖြစ်အတည်ပြုထားပါသည်။ထို့အတွက်ကြောင့်ဤဟဒီးစ်၏စနဒ်အထောက်အ ထားများကိုမှန်ကန်ကြောင်းမတင်ပြထားပေ။သို့သော်ဤဟဒီးစ်တော်၏မှန် ကန်မှုအတွက်အုပ်စုတစ်စုကိုဖေါ်ပြထားပေသည်။စနဒ်အထောက်အထား သည်ကိုမမှန်ကန်ကြောင်း၊စိတ်ချယုံကြည်လိုမရသောအချက်ကို(၎င်းအုပ်စုအတွင်း)တွေ့ရပေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့်ဟဒီးစ်တော်အား၊(မှန်ကန်ကြောင်း၊ ထောက်ခံကြောင်း)လုပ်ရာမဖြစ်ဘဲ၊မမှန်ကန်ကြောင်းပြဆိုရာရောက်နေပေ သည်။ဤအရာသည်၎င်း(ဟာကေမ်မေနေရှာပူရီး)၏အခြေအမြစ်မခိုင်လုံသောအထောက်အထားဖြစ်ပေသည်။
ဟာကေမ်မေနေရှာပူရီအနေဖြင့်( مرفوع )နည်းလမ်းဖြင့်အဘူဟိုရိန်ရာ ထံမှတဆင့် တင်ပြသည်မှာ-
اِنی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدھما : کتاب اللّہ و سنتی و لن یفترقا حتی یردا علّی َالحوض
''الضبی'' عن ''صالح بن موسیٰ الطلح'' عن ''عبدالعزیز بن رفیع'' عن ''أبی صالح'' عن ''أبی هریرہ''
ဤဟဒီးစ်သည်လည်းပထမအရင်ဟဒီးစ်ကဲ့သို့ပင်(مجهول )ဖြစ်ပေသည်။ ဤဟဒီးစ်တော်၌လာရှိသောရဝီတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်(ဆာလေဗင်မူစာအလ်သွာလ်ဟီ)နှင့်ပက်သက်၍ကြီးမားသော ထိပ်တန်းအိုလမာရေဂျာပညာရှင်များ၏အမြင်ကိုဖေါ်ပြပါမည်။ယာအ်ယားဗင်မိုအီး(န)ပြောကြားသည်မှာ-ဆာလေ ဗင်မူစာအလ်သွာလ်ဟီသည်စိတ်ချယုံကြည်ရသူမဟုတ်ချေ။အဘူဟာသေမ် ရာကီး ပြောကြားသည်မှာ-၎င်းဟဒီးစ်သည်မမှန်သောဟ ဒီးစ်နှင့်စိတ်မချရ သောဟဒီးစ်ဖြစ်ပေသည်။ထိုသူ(ဆာလေဗင်မူစာအလ်သွာလ်ဟီ)အနေ ဖြင့်မြောက်များစွာသော၊စိတ်ချယုံကြည်ရသော ရီဝါယတ်တင်ပြသူများတင်ပြသည်ဟုဆိုကာလက်ခံလို့မရသော၊မမှန်ကန်သောဟဒီးစ်များကိုတင်ပြထားပေသည်။
နေစာအီအနေဖြင့်ပြောကြားသည်မှာ-၎င်း၏ဟဒီးစ်ကိုရေးဖို့မလိုအပ် ပေ။အခြားတစ်နေရာ၌၎င်းဟဒီးစ်ကိုဘေးချိတ်ထားရမည်ဟုဆိုထားလေ သည်။
အဗ်နေဟဂ်ျအနေဖြင့်မိမိ၏ကျမ်း تهذیب التهذیب ၌ရေးသားထားသည်မှာ-အဗ်နေဟေဘန်အနေဖြင့်ပြောကြားသည်မှာ-ဆာလေအဗ်နေမူဆာအား စိတ်ချယုံကြည်သူများအနေဖြင့်၊၎င်းတို့၏သိက္ခာသမာဓိနှင့်ဆန့်ကျင်သော စကားများပြောဆိုခဲ့သည်ဟုဆိုထား၏။အဆုံး၌ပြောကြားသည်မှာ-၎င်း၏ဟဒီးစ်သည်စံမှတ်ကျောက်မဟုတ်ကြောင်းဖြစ်ပေသည်။
အဘူနအီးမ်ပြောကြားသည်မှာ- ၎င်း၏ဟဒီးစ်ကိုဘေးချိတ်ထားရန်၊ ၎င်းအနေဖြင့်မမှန်ကန်သောဟဒီးစ်ကိုတင်ပြသူဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ပေသည်။
ဆက်လက်၍အဗ်နေဟဂ်ျအနေဖြင့်မိမိကျမ်း( کاشف) ၌ပြောကြားသည် မှာ-၎င်း၏ဟဒီးစ်ကိုဘေးချိတ်ထားဖို့ဖြစ်ပေသည်။
ဇဲဟ်ဘီးအနေဖြင့်မိမိကျမ်း( تهذیب التهذیب) ၌ပြောကြားသည်မှာ-၎င်း၏ ဟဒီးစ်သည် မမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်ပေသည်။
မည်မျှအထိပင်ဆိုရလျှင်ဇဲဟ်ဘီးအနေဖြင့်မိမိကျမ်း(میزان الاعتدال) ၌ဤ ဟဒီးစ်တော်ကိုတင်ပြသည်မှာ၎င်းတင်ပြလာသောဤဟဒီးစ်တော်သည်မမှန်ကန်သောဟဒီးစ်တော်များမှတစ်ခုဖြစ်ပေသည်။
အဗ်နေအဗ်ဒွလ်ဘတ်ရေအနေဖြင့်မိမိ၏ကျမ်း(تمهید ) ၌ဤဟဒီးစ် ၏စကားစုအားအောက်ဖေါ်ပြပါအထောက်အထားများဖြင့်ဖေါ်ပြထားပါသည်။
''عبدالرحمان بن یحییٰ '' عن ''احمد بن سعید '' عن ''محمد بن ابراھیم الدبیلی'' عن ''علی بن زید الفرائضی'' عن ''الحنینی'' عن ''کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف'' عن ''أبیه'' عن ''جدہ''
အဘူသာဝတ်ဒ်အနေဖြင့်ပြောကြားသည်မှာ-၎င်းသည်လိမ်ညာ၊မုသား ဆိုသူများထဲမှ တစ်ယောက် ဖြစ်ပေသည်။
အဗ်နေဟေဘန်အနေဖြင့်ပြောကြားသည်မှာ-အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗင်ကစီးရ် အနေဖြင့်မိမိ၏ဖခင်နှင့်အဖိုးထံမှဟဒီးစ်ကိုဆင့်ပြန်တင်ပြပေသည်။၎င်းဟဒီးစ်များသည်လုပ်ကြံမှုအပေါ် အခြေခံထားသောဟဒီးစ်များသာဖြစ်ပေသည်။၎င်း၏ကျမ်းထဲမှရီဝါယတ်နှင့်အဗ်ဒွလ္လာဟ်ဗင်ကစီးရ်ဆီမှရီဝါယတ်ကိုတင်ပြခြင်း သည်လုံးဝဥဿုန်ဟရမ်ဖြစ်ပေသည်။သို့သော်စောတကတက်သည့်အနေဖြင့်၊ ကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်ကြောင်းပြသသည့်အနေဖြင့်တင်ပြနိုင်ပေသည်။
နေစာအီနှင့်ဒါရွတ်ကက်(သွ)နီတို့ပြောကြားသည်မှာ-၎င်းဟဒီးစ်ကိုဘေး ချိတ်ထား ပါလေ။လက်မခံပါ နှင့်။အေမာမ်အဟ်မဒ်ဖွင့်ဆိုထားသည်ကား-၎င်း၏ဟဒီးစ်သည်မမှန်ကန်ပေ။ထို့အပြင်စိတ်ချယုံကြည်ရသူလည်းမဟုတ် ပေ။အလ်နေအိုအီးအနေဖြင့်လည်းဤအတိုင်းဆိုထားပါသည်။
အံ့ဩစရာသည်ကား-အဗ်နေဟဂ်ျအနေဖြင့် التقریبကျမ်း၌ဘာသာပြန် ရာဆွာလေဗင်မူစာကိုမမှန်ကန်သောဟဒီးစ်တင်ပြသူအဖြစ်ဆိုထားပြီး၎င်းအားလူလိမ်၊လူညာ၊မုသားဆို သူကိုဆိုထားသူများကိုအစွန်းရောက်သူများဟုရေး သားထားပေသည်။
အမှန်တကယ်ကြတော့-ကြီးမားသောထိပ်တန်းအိုလမာရေဂျာအနေ ဖြင့်၎င်းအားလူလိမ်၊လူညာ၊မုသားပြောဆိုသူ၊ဟဒီးစ်အတုများလုပ်သူဟုဆို ထားသည်။
မာလစ်က်အနေဖြင့်မိမိ၏ကျမ်း(الموطا )၌ဤဟဒီးစ်တော်အားအ ထောက်အထား မရှိဘဲဆင့်ဆိုထားကြောင်း၊မိုရ်စာလ် مرسلနည်းဖြင့်ဆင့် ဆိုထားကြောင်း၊ဤကဲ့သို့တင်ပြလာသောဟဒီးစ်သည်တန်ဖိုးမရှိကြောင်း၊လူတိုင်းအသိပင်ဟုဆိုထားလေသည်။
ဤကဲ့သို့လေ့လာစူးစမ်းသုံးသပ်၍ဟဒီးစ်(و سنتی)သည်ဟဒီးစ်အတုဖြစ် ကြောင်းဟဒီးစ်အားတင်ပြထားသူများသည်လူလိမ်၊လူညာ၊မုသားဆိုသူများ ဖြစ်ပြီး၊
အိုမိုင်ယာမင်းဆိုး၊မင်းညစ်၏အခစားများဖြစ်ကြောင်းထင်ထင်ရှားရှားသိမြင်နိုင်ပေသည်။မှန်ကန်သောဟဒီးစ် وعترتی နေရာ၌အစားထိုးပြီးဟဒီးစ်အတု ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ဤနေရာ၌မက်စ်ဂျစ်များရှိတရားဟောဓမ္မကထိကများ၊ဘာသာရေး ဟောကြားသူများ၊နမာဇ်ရှေ့ဆောင်ဆရာများအနေဖြင့်တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွ)ဆီမှဆင့်ဆိုထားခြင်းမရှိသော၊ဤဟဒီးစ်ကိုစွန့်လွတ်ဖို့အရေးကြီးလိုအပ် ပေသည်။
ဤဟဒီးစ်နေရာ၌ဟဒီးစ်အစစ်အမှန်ကိုလူထုကိုတင်ပြရပေမည်။မွတ်စလင်စဟီး ကျမ်း၌ပါဝင်သော (اھل بیتی) နှင့်သေရ်မီးဇီး၌ပါဝင်သော (وعترتی اهل بیتی )ပါသောဟဒီးစ် တော်ကိုသာလျှင်တင်ပြရပေမည်။
အဆုံး၌ကျွန်တော်တင်ပြလိုသည်မှာဟဒီးစ်တော်၌တမန်တော်မြတ် ကြီး(ဆွ)၏ဆိုလိုချက်မှာ(اھل بیتی)သည်ကိုယ်တော်၏အမျိုးအနွယ်အိမ် တော်သူ၊အိမ်တော်သားပင်ဖြစ်ပေသည်။သာဓကအားဖြင့်အေမာမ်အလီ (အ.စ)၊ဟဇရတ်(သ)ဖွာသေမာအ.စ)၊အေမာမ်ဟစန်(အ.စ)၊အေမာမ်ဟို စိုင်း(န)(အ.စ)၊တို့ ဖြစ်ပေသည်။
အကြောင်းသည်ကားမွတ်စလင်အနေဖြင့်မိမိ၏စဟီးကျမ်း နှင့်သေရ် မေဇီးအနေဖြင့်မိမိ၏စိုနန်ကျမ်း တို့၌ဟဇရတ်(သ)အာအေရှာသခင်မထံမှအထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြောင်းကိုဆင့်ဆိုထားသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။
نزلت ھذہ الآیة علیٰ النبی-صلی الله علیه(وآ له)وسلم ۖ .( اِنّما یریدُ اللّہُ لیذھبَ عَنْکم الرِجْسَ أھْلَ البیتِ و یُطِّھرکم تطھیراً)فی بیت أم سلمة فدعا النبی –صلی الله علیه(وآ له)وسلم ۖ فاطمة و حسناً و حسیناً فجللھم بکسائٍ و عَلیّ خلف ظهره فجلله بکساء ثم قال:اللهم هولاء اهل بیتی فاذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا.قالت ام سلمته:و انا معهم یا نبی الله؟قال:انت علی مکانک وانت الی الخیر
အာယတ်တော်(အ)သခင်မကြီးအွန်မေစလ်မာအိမ်၌ကျရောက်လာပေသည်။တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အနေဖြင့်၊ဟဇရတ်(သ)ဖွာသေမာအ.စ)၊အေ မာမ်ဟစန်(အ.စ)၊အေမာမ်ဟစိုင်း(န)(အ.စ)၊တို့ကိုမိမိ၏ခြုံစောင်အောက်၌ ထားတော်မူ၏။ထိုအချိန်၌အလီ(အ.စ)သည်ကိုယ်တော်မြတ်၏နောက်၌ရှိ၏။အလီ(အ.စ)ကိုပင်မိမိ၏ခြုံစောင်အောက်သို့ခေါ်ယူကာဤကဲ့သို့ဆိုလေ၏။
အွန်မေစလ်မာလျောက်ထားသည်မှာ-အိုအလ္လာဟ်၏တမန်တော်ကျွန်မ လည်းဤ အုပ်စု၌ပါဝင်ပါသလား? (ဆိုလိုသည်အာယတ်တော်ရှိ(اھل بیت)ဆို သည့်စကားစု၌ကျွန်မရောပါဝင်ပါသနည်း?)ဖြစ်ပေသည်။
အဖြေပေးတော်မူသည်မှာသခင်မသည်မိမိ၏နေရာ၌ပင်နေပါလေ။(ခြုံစောင် အောက်မလာပါနှင့်)ထို့အပြင် အသင်မသည်ကောင်းမြတ်သောလမ်းစဉ်အပေါ်၌ရှိနေသောသူမဖြစ်ပေသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အနေဖြင့်(عترت)အနွယ်တော်မွန်အားကျမ်း တော်မြတ်ကုရ်အာန်နှင့် အတူထားတော်မူခဲ့ပြီးနှစ်ခုစလုံးကိုအလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်ဘက်မှစံမှတ်ကျောက်ဖြစ်ကြောင်း လူထုအကြားတင်ပြရှင်းပြခဲ့ရာအနှစ် ချုပ်ကိုပြောဆိုလိုရပေသည်။
၁။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကဲ့သို့ပင်သာသနာ့အလုပ်ကိစ္စများ၌အဟ်လေ ဘိုက်(အ.စ)၏ပြောဆိုသွန်သင်မှုများသည်စံမှတ်ကျောက်ဖြစ်ပေသည်။အကီသာအပိုင်းမှစ၍ဖေက်ဟီအပိုင်းအထိအဟ်လေဘိုက်(အ.စ)၏ပြောဆိုသွန် သင်မှုများကိုစွဲမြဲစွာဆုပ်ကိုင်ထားဖို့မလွဲ၊မသွေလိုအပ်ပေသည်။
အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)ဘက်သို့ဦးတည်ဖို့အထောက်အထားသက်သေရ ပြီးနောက်အခြားဘက်သို့ဦးတည်ဖို့လုံးဝမလုပ်သင့်ချေ။တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ဝဖာသ်ဖြစ်ပြီးနောက်ခေလာဖသ်ကိစ္စ၊ အွန်မသ်ကိုပဲ့ပြင်ရမည်ဖြစ် သောအစိုးရကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍မွတ်စလင်လူထုအကြားအုပ်စုနှစ်စုဖြစ်သွားရလေသည်။
အုပ်စုတိုင်းသည်မိမိတို့မှန်ကန်ကြောင်းပြရန်logicအထောက်အထား သက်သေရှိပေသည်။ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ကွဲလွဲမှုသဘောထားမတူညီမှုရှိ သောငြားလည်းအဟ်လေဘိုက်(အ.စ)၏ပညာအရည်အချင်း၊ အဆင့်အတန်း နှင့်စပ်လျဉ်း၍အကွဲအလွဲမရှိရန်လုံးဝလိုအပ် ပေသည်။
အကြောင်းသည်ကား-ဟဒီးစ်စေစကာလိုင်း၏မှန်ကန်မှုနှင့်ပက်သက်၍ ကွဲလွဲမှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။ ဤဟဒီးစ်တော်သည်အကီသာများနှင့် အဟ်ကမ်၌ကုရ်အာန်နှင့်အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)ဘက်သို့ဦးတည်ပြဆိုထားပေသည်။
အကယ်၍မွတ်စလင်လူထုကြီးအနေဖြင့်ဤဟဒီးစ်တော်အပေါ်လက် တွေ့အသုံးချမည်ဆိုလျှင်ကွဲလွဲမှုများသည်နည်းပါးလာပြီး ၊စည်းလုံးမှုအခြေအ နေများပြားလာပေမည်။
၂။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်သည်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ کلامဖြစ်သည်အ တွက်အမှားအယွင်းမျိုးစုံမှကင်းရှင်းလေ၏။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်အတွင်းအမှားအယွင်းရှိသည်ယူဆရန်မည်သူမျှမဖြစ်နိုင်ချေ။ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ဤကဲ့သို့မိန့်တော်မူထားလေ၏။
အမှားအယွင်းသည်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ရှေ့မှ၎င်း၊နောက်မှ၎င်း ဝင်ရောက်မစွက်ဖက်နိုင်ချေ။ဤကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်သည်ဆင်ခြင်တုံ တရားနှင့်ပြီးပြည့်စုံတော်မူသောချီးမွမ်းထောပနာမှုကိုခံယူထိုက်တော်မူသော အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ဘက်မှကျရောက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤဟဒီးစ်တော်သည်အဟ်လေဘိုက်(အ.စ)၏သန့်စင်၊သန့်ပြန့်မှုအမျိုး မျိုးသောအပြစ်၊အနာ၊အဆာများမှကင်းလွတ်ကြောင်းသက်သေခံနေပေသည်။အကြင်သူတစ်ဦး၊တစ်ယောက်သည် မာစူမ်(ဖြစ်ခဲ့)ဖြစ်သော်လည်းနဘီ၊ရစူလ်မဟုတ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်ပေသည်။
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ